झन् रहस्यमय बन्दै मौलाना पक्राउ प्रकरण - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
झन् रहस्यमय बन्दै मौलाना पक्राउ प्रकरण
बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेका माैलना सुभराती वास्तवमै आईएसआई एजेन्ट हुन्?
आकाश क्षेत्री बाँके चैत १४
भारतीय सञ्चार माध्यम भन्छन्, 'जबरजस्ती करणी उद्योगमा नेपालगञ्जमा पक्राउ परेका एक जना मुस्लिम धर्मगुरु सुभराती जोलाह भारतका मोस्ट वान्टेड हुन्। उनी पाकिस्तानको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी आईएसआईका नेपाल एजेन्ट हुन्।'
मौलाना सुभराती जोलाह हाल नेपालगञ्ज प्रहरी हिरासतमा छन्। मुस्लिम बहुल सीमावर्ती क्षेत्रका अन्य घटनालाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले 'आईएसआई'को चस्माले हेर्दै आएको अवस्थामा के हो सुभरातीसँग जोडिएको प्रकरण? के उनी भारतीय सञ्चारमाध्यमले दावी गरेजस्तै साँच्चै पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त आईएसआई एजेन्ट हुन् अथवा सामान्य धर्मगुरू?
चैतको पहिलो साताको यो घटनाको वास्तविकता बुझ्न नेपालखबर टोली घटनाको सुरूवात विन्दू फुल्टेक्रास्थित आम्ना मदरसा, पूरैनीस्थित नहरपुर्वास्थित उनको निवास एवं पाकिस्तान जानु अगाडिको उनको गाउँ बेउचहवा पुगेको थियो। घटनासँग जोडिएका स्थलगत पात्र, उनका आफन्त एवं गाउँलेहरुसँग भेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट:
‍घटनाको जग जबर्जस्ती करणी
बाँके प्रहरीले मौलाना सुभरातीलार्इ जबरजस्ती करणीको आरोपमा चैत्र २ गते पक्राउ गरेपछि उनी प्रशासनकाे अनुसन्धान दायरामा अाए।
गैरकानुनी रुपमा एक महिलालार्इ नागरिकता दिनका लागि मौलाना सुभराती र बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका कार्यालय सहायक इमामुल खाँले मदरसामा बोलाएर यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राख्दै अश्लिल हर्कत गरेकाे अाराेप उनीविरूद्ध छ। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा दुबै हिरासतमा लिइएको बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी टेक बहादुर तामाङ बताउँछन्।
एसपी तामाङका अनुसार घटनाकाे भोलिपल्ट सुभरातीबारे केही कुराहरु बाहिर आएपछि प्रहरीले फेरि अर्को कोणबाट अनुसन्धान थालेको छ।
एसपी तामाङ भन्छन्, 'हामीले जबरजस्ती करणीको केसमा पूरा अनुसन्धान गर्न नपाउँदै सुभरातीले पाकिस्तानबाट पनि नागरिकता लिएको भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन्। भारतका सञ्चार माध्यमहरुले सुभरातीलार्इ भारतकाे राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआइए)को मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको र उनले नेपालमा बसेर भारतबिरुद्धका गतिविधि गरेकाे बताइरहेका छन्, हामी त्यसको पनि छानबिन गर्दैछाैं।'
भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी रुकुमकी एक महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरका कार्यालय सहयोगी इमामुल हक खाँ र मौलाना सुभरातीसँग अनुरोध गरेपछि ती महिलालार्इ उनीहरुले मदरसामा बोलाएको र त्यहीँ जवरजस्ती गर्न खोजेको प्रहरीको बयानमा महिलाले बताएकी छन्।
मौलाना सुभराती भारतीय गुप्तचर एजेन्सीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको र दोहोरो नागरिकताको विषयले बाहिर व्यापकता पएपछि बाँके प्रहरीले चैत्र ५ गते उनको फुलटेक्रास्थित नहरपुर्वामा रहेको घरमा र १३ गते नरैनापुरस्थित बेउचहवा गाउँमा छापा मारेको थियो।
दुवै घरबाट उनीविरुद्धका कुनैपनि ठोस सबुत नपाइएको प्रहरी बताउँछ। एसपी तामाङले त्यहाँ कुनै शंकास्पद वस्तु फेला नपरेकाे बताए। नहरपुर्वाको घरबाट ल्यापटप, नेपाली नागरिकता र बेउचहवाको घरबाट सुभरातीको नेपाली पासपोर्ट फेला परेको छ। 'पाकिस्तानको नागरिकताबारे हामीले अनुसन्धान बढाएका छौं। यो नम्बर भएको नागरिकता यो व्यक्तिको नाममा छ कि छैन भनेर छानविन गर्न हामीले इन्टरपोलसँग सहायता मागेका छौं', उनी भन्छन्।
मौलानालार्इ पाकिस्तानसँग जोड्ने कडी
नेपालबाट सन् १९८४ मा सुभराती जोलाहका चाचा कलिम अहमदसहितको एक नेपाली टोली पाकिस्तानको राजधानी कराँची लगायतका ठाउँमा अध्ययनको लागि गएको थियो। त्यसकाे केही वर्षपछि कलिमले भतिज सुभरातीलार्इ पाकिस्तानमै अध्ययनकाे प्रबन्ध मिलाएर उतै बाेलाए। तत्कालीन लक्ष्मणपुर वडा नं.१ बाट २०४४ साल चैत्र १६ गते ३१२ नं.को वंशज नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सुभराती जोलाह (तल हेर्नुहाेस् तस्विर) त्यसपछि अध्ययनका लागि पाकिस्तान लागे।
१० वर्ष इस्लाम धर्मको अध्ययनपछि एक वर्ष अगाडि चाचा कलिम नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल फर्किएपछि उनका चाचा कलिम लक्ष्मणपुर गाविसमा पर्ने सिमावर्ती बेउचहवा गाउँको अमजदिया बरकातिया मदरसामा मौलाना भएर काम गर्न थाले। त्यसको ठिक एक वर्षपछि सुभराती जोलाह पनि पाकिस्तानबाट अध्ययन सकेर सोही गाउँमा आए र वरकतिया मदरसामा पढाउन थाले। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सुभराती उक्त गाउँबाट भागेर भारतको उत्तर प्रदेशमा बसोबास गर्न थाले। माअाेवादी शान्ति प्रक्रियामा अाएसँगै उनी नेपाल फर्किए। तर पुरानाे गाउँ छाेडे नेपालगञ्जको पुरैनी नहरपुर्वामा बसोबास गर्न थाले।
माैलना सुभराती अहिले पनि नेपालगञ्जको फुल्टेक्रास्थित आम्ना नामक मदरसा सञ्चालन गर्छन्।
नेपालमा सुभराती जोलाह नामबाट नागरिकता लिएका जोलाहले पाकिस्तानमा मकसूद जोलाहबाट नागरिकता र राहदानी लिएको भारतीय खुफिया एजेन्सीकाे अाराेप छ। सार्वजनिक भएको पाकिस्तानी नागरिकताको फोटो कपीमा नं.सीसी ६८७९४७ रहेको देखिन्छ। तर, उक्त फोटकपीको सक्कल भने कहीँ फेला परेकाे छैन।
मौलाना सुभरातीलार्इ पाकिस्तानमा अध्ययनको लागि पठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनका चाचा कलिम आफूलार्इ पनि यस्तै आरोप लाग्ने हो कि भन्दै त्रसित देखिन्छन्। एकवर्ष अघिबाट कलिम पनि उक्त सिमावर्ती गाउँ बेउचहवाबाट भागेर नेपालगञ्ज आएका थिए। त्यसपछि उनी कहिल्यै बेउचहवामा फर्किएका छैनन्।
नेपालखबरसँगको सम्पर्कमा आएका उनले पाकिस्तानबाट फर्केपछि शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारविरूद्ध षड्यन्त्र भएकाे, तर प्रहरी समक्ष कुनै सबुत नहुँदा बाँचिरहेकाे नेपालखबरसँग बताए। भतिजामाथि यस्तै षड्यन्त्र भएको कलिमको दाबी छ।
सुभरातीको घरमा पुग्दा
चैत महिनाकाे गर्मीमा नेपालगञ्जकाे तापक्रम ३६ डिग्री सेल्यिसेस पुगेकाे छ। 'मौलाना सुभरातीको घर कहाँ हो?' भन्दै हामी नेपालगंञ्ज उपमहानगरपालिको पुरैनी पुग्याैं।
नेपालगंञ्ज वडा नम्बर २२ स्थित पुरैनी नहर्पुर्वास्थित सुभरातीको घर हामीले फेला पार्‍यौं। नहर्पुर्वाका एक घुम्ती व्यापारीले चोर औंला तेर्स्याउँदै देखाइदिए, 'उ त्यही हो।'
खाल्टाखुल्टी परेको सडक र त्यसको छेउमा कलेजी रङ भएको घर नै सुभरातीको रहेछ। थप खाेजका लागि भोलिपल्ट ११ गते हामी सुभरातीको जन्मथलो नरैनापुर जाने योजनामा थियौं। त्यो भन्दा पहिले हामीले उनको परिवारसँग कुराकानी गर्ने विचार गर्‍यौं। ७ छोरी र ३ छोराका बुबा सुभरातीको घरमा उनका एक भाइ र चाचा कलिम अहमत पनि बस्दा रहेछन्। उनका बुबाआमा र दार्इहरु नरैनापुरमै बसोबास गर्दा रहेछन्।
माैलाना सुभरातीकी श्रीमती र सन्तानहरू
हामी ढोकाबाटभित्र छिर्ने वित्तिकै करिव १२-१३ वर्षकी बालिका देखा परिन्। उनी सुभरातीकी छोरी थिइन्। हामीले उनकी आमालार्इ बोलाउन अनुरोध गर्‍यौं। केही समयमै देखा परिन्, ३०-३५ वर्षीया महिला। हामीले अनुमान लगायौं, पक्कै पनि यी सुभरातीकी श्रीमती हुनुपर्छ।
जैनब अन्सारी र सुभराती विवाह बन्धनमा बाँधिएको २० वर्ष भइसकेको रहेछ। नेपाली भाषा राम्ररी नबुझ्ने जैनव राम्रोसँग कुरा गर्न सकिरहेकी थिइनन्। कुरैकुरामा उनका आँखाहरु रसाए। आफ्नो श्रीमानलार्इ कसैले फसाएको उनको भनाइ थियो।
परिवारमा धेरै छोराछोरी भएकाले उनीहरुलार्इ पाल्न आफ्ठ्यारो भएको उनले सुनाइन्। 'परीक्षा आइसक्यो, कसरी पैसा तिर्ने? उहाँ भित्र (हिरासत) हुनुहुन्छ', उनले सुनाइन्।
सुभरातीको गाउँ पुग्दा: त्रासमा स्थानीय
गत आइतबार मौलाना सुभराती जोलाहकाे जानकारी खाेज्दै हामी उनको जन्मथलो बाँके जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगन्जदेखि करिव ५० किलोमिटरको दुरीमा रहेको नरैनापुर गाउँपालिकामा पर्ने बेउचहवा गाउँमा पुग्याैं।
उक्त गाउँमा पुग्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह पनि त्यहीँ थिए। अभियुक्त सुभरातीबारे गाउँपालिका अध्यक्ष शाहसँग सोधपुछ गर्दा उनी कुराकानी गर्न तयार देखिएनन्, पन्छिन खाेजे। 'जसले जे गरेपनि अफ्ठ्यारो हुने हामीलार्इ नै हो, यहाँ एक किसिमको त्रास छ। यसलार्इ तपार्इंले बुझ्नुपर्छ। त्यो भन्दा अरु म केही भन्न सक्दिन', यति भनेर उनी बाटाे लागे।
गाउँका अन्य बासिन्दा यो विषयमा केही बोल्ने पक्षमा देखिएनन्। केही बाेल्न चाहिरहेजस्ताे भने गर्थे। चारैतिर अाँखा डुलाउँथे र चुप लाग्थे।
पाकिस्तानबाट फर्किसकेपछि मौलाना सुभरातीले केही समय अध्ययन गराएको मदरसा अमजदिया बरकातियाका मौलाना (जसले अाफ्नाे नाम बताउन चाहेनन्) पानी पिउन अनुरोध गरे। एकान्तमा लगेर साेधे, 'सुभराती पकिस्तानको एजेन्ट भएको खण्डमा नेपालमा त्यसको सजाय के हुन्छ? भारतले पाकिस्ताको एजेण्ट भएको पुष्टि गर्न सकेन भने के हुन्छ?' भन्न चासाे राखे। त्यसअघि उनले हामीबीचको कुराकानी माेबाइल फाेनमा रेकर्ड भए नभएकाे निश्चित गरेका थिए।
पाकिस्तानबाट फर्केपछि सुभराती जोलाहले अध्यापन गराएको मदरसासँगै मस्जिद
स्थानीय मदरसाका मौलानासँग कुरा भएको थाहा पाएपछि गाउँका केही पाका नागरिकहरु खुल्न चाहे। एकजना पाका मानिसले सामुन्ने बोलाउँदै भने, 'सुभराती यही गाउँमा जन्मेको मात्र होइन, उनका बुबा पनि यहीँ जन्मेका हुन्। उसले कलिलै उमेरमा यो गाउँ छोडेर पाकिस्तान पढ्न गएको थियो। त्यसपछि के गर्‍यो, हामीलार्इ थाहा छैन।'
सुभरातीको गाउँबाट फिर्ता हुने क्रममा करिव दुइ किलोमिटर पर पुगेपछि एउटा मोटरसाइकलले हामीहरुलार्इ रोक्यो। त्यसमा दुइजना मानिस सवार थिए। एकजना करिब ३५ वर्षजतिका, अर्का करिव ६०-६५ जतिका। आफूहरुलार्इ सबै कुरा थाहा भएको भन्दै उनीहरूले घटनाबारे बेलिविस्तार लगाउन चाहे।
मौलाना सुभराती जोलाहको घर
नाम नबताउने सर्तमा उनीहरूले सुनाए:
सुभराती यही गाउँमा जन्मे हुर्केको केटो हो। धेरै वर्ष पाकिस्तानमा पढेपछि गाउँ फर्कियाे। मदरसामा पढाउन थाल्याे। बीचमा माओवादीको दबदबाका कारण त्रासले भागेर उत्तर प्रदेशकाे श्रावस्ती जिल्लाको भिन्गा भन्ने ठाउँमा घर बनाएर बसोबास गर्न गयाे। जो नरैनापुरबाट २० किलोमिटरको दुरीमा पर्छ। माओवादी द्वन्द्व सकिएपछि सुभराती फेरि गाउँमा फर्कियो। गाउँमा मदरसा खोल्ने भन्दै पाकिस्तानबाट १६ लाख रुपौयाँ ल्याएको भन्ने हल्ला गाउँमा फैलिएको थियो। तर, गाउँमा उसले कुनै मदरसा खोलेन। १० वर्ष पहिले भारतीय सिमावर्ती शहर रुपैडियामा नक्कली नोटकको कारोबार गरेको आरोपमा सुभराती पक्राउ परेकाे हल्ला गाउँमा फैलिएको थियो। उ त्यहाँबाट रिहा भयो।
सन् २०११ तिर होला, सुभरातीको घरमा ७-८ जना पाकिस्तानी आएका थिए। केहीदिन पछि उनीहरु त्यहाँबाट गए। त्यसपछि सुभराती र उनको चाचा मौलाना कलिम अहमतलार्इ यस गाउँमा बस्न अप्ठ्यारो भयो। त्यो घटनापछि उनीहरू गाउँ फर्किएका छैनन्। छाेटाे समय अाए पनि फर्किहाल्छन्। चाचा कलिम पनि २०७३ सालपछि गाउँमा देखिएका छैनन्। उनले गाउँको मदरसाको ठूलो रकमको हिसाब नबुझाएकाले नरैनापुर गाउँपालिकाले उनलार्इ कारबाही गरेर अर्कौ मौलाना राखेको छ। सबै गाउँलेहरु डराएका छन्। त्यसैले तिनीहरू चुप छन्।
बाँकेमा आतंकवाद: कति सत्य कति भ्रम?
भारतसँगकाे सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली मुस्लिमहरुका आ-आफ्नै पीडा छन्। आतंकवादसँग जोडिएका समस्याहरु पनि छन्। र, अनाहकमा सर्वसाधारणले दु:ख पाएका उदाहरण पनि छन्। १८ महिना बाँकेको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेका एसपी टेकबहादुर राईले सरुवा निश्चित भइसकेपछि गत साउन २ गते सार्वजनिक बाँके विश्वका नामुद आतंकवादीहरुको आश्रयस्थल भएको दाबी गरे। उनले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन लस्कर ए तोयवाका नेपाल प्रमुख बाँकेमा रहेको तथ्य प्रहरीले बाहिर ल्याएको समेत जिकिर गरे। लस्कर ए तोयवाका नेपाल प्रमुख नेपालगन्जको फुल्टेक्रामा ७ वर्षसम्म बसेकाे उनकाे दाबी थियाे। त्याे दाबी अाफैँमा सनसनीपूर्ण थियाे। तर यथार्थ याे हाे, अहिलेसम्म याे क्षेत्रबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको सदस्य पक्राउ परेका छैनन्। बरू सीमावर्ती क्षेत्रमा आतंकवादी बस्छन् भन्ने दाबीका अाधारमा मुस्लिम समुदाय त्रसित पार्ने काम प्रहरी प्रशासनबाट भएकाे छ।
पाकिस्तानी आतंकवादीहरुसँग संलग्नताको आरोपमा नेपालका मुस्लिमहरु असुरक्षित भएको विगतका घटनाले पनि देखाउँछन्। २०५५ असार १५ गते पूर्वराज्यमन्त्री तथा सांसद मिर्जा दिलसाद वेग सिफलस्थित घरकै आगँनमा गोली हानेर मारिए। २०६४ असोजमा अर्का मुस्लिम अब्दुल माजिद मनिहारको नेपालगञ्जमा हत्या भयो। त्यस्तै २०६६ पुसमा बुटवलमा सौकत बेगको हत्या भयो। २०६६ माघमा अर्का मुस्लिम जमिम शाहलाई दरबारमार्गको हेल्थ क्लबमा नुहाएर पानीपोखरीस्थित घरमा जानेक्रममा गोलीहानी हत्या गरियो। यस्तै २०६८ असोज ९ मा काठमाडौंको ब्यस्त घण्टाघरमा नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संघका अध्यक्ष फैजान अहमद सडकमै अज्ञात ब्यक्तिको गोलीको शिकार भए।
यी सबै घटनामा एउटै समानता छ। त्यो के भने यी कुनै घटनामा संलग्न पनि पक्राउ परेनन्। सार्वजनिक सत्य हो भारतीय निसानामा भएका घटनाका हत्यारा नेपालमा पक्राउ पर्दैनन्।
प्रकाशित १४ चैत २०७४, बुधबार | 2018-03-28 19:34:49
नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति राजदूतहरुको चासो
नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन युरोपेली सङ्घ (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ।
भक्तपुरबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख ४३१७ नं को ट्रकले आज ठक्कर दिँदा सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बालकोट बस्ने ६२ वर्षीय मिथिलेशप्रसाद उपाध्यायको...
यस्तो थियो, ७८ लाख घुस लिएका अख्तियार आयुक्त पाठकविरुद्ध महाअभियोग पत्र
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथिको महाअभियोग टरेको छ।
कृषि विकास कार्यालय तेह्रथुमका तीन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुमका प्राविधिक सहायक हरिगोपाल आचार्यसहित तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा...
अख्तियारले आयुक्तको सूचीबाट पाठकको नाम हटायो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको नाम आयुक्तको सूचीबाट हटाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश ‘सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा’: उप प्रधानमन्त्री पोखरेल
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संघीयता अनुकूलको कानुन र संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेकाले सरकारको कामले गति लिन नसकेको...